DxOMark mmelite LG V40 ThinQ Review ma na-abawanye akara ya | Gam akporosis
DxOMark na-emelite LG V40 ThinQ nyochaa ma bulie akara ya
DxOMark ebipụtawo a melite nyocha gi LG V40 ThinQ nke kariri onu ogugu, nke mechara bụrụ 94, site na 1 isi karịa nsonaazụ mbụ nke ụbọchị ole na ole gara aga (93). Idozi ahụ bụ n'ihi njehie ha chọpụtara n'otu n'ime ule ha.
Agbanwe akara nke abụọ kwekọrọ na Ngosiputa na mmụba, site na 83 ruo 88 isi, nke weta akara foto ahụ na 98, ma e jiri ya tụnyere isi ihe 96 mbụ na ngalaba a, nke mekwara ka ntakịrị mmụba na nsonaazụ ya.
Na njedebe ndị nyocha na-eto V40 ThinQ maka ikpughe ya nke ọma, ma ha enwechaghị ịnụ ọkụ n’obi banyere ụzọ ekwentị si apụta n’èzí. Agba dị mma ma na-enye obi ụtọ, ha na-ekwu, a na-anọchi anya nkọwapụta nke ọma na agbapụ n'èzí.
Cheta nke ahụ ọnụ ya nwere igwefoto nwere okpukpu atọ nke mejupụtara ọkọlọtọ ngwa anya 12 MP (f / 1.5, 1,4 μm na 78 degrees wide), 16 MP obosara (f / 1.9, 1,0 μm na 107 degrees) na lens telephoto 12 MP (f / 2.4 , 1,0 μm na ogo 45). Otu igwe foto ato a nwere ikike maka ntule ihe ntughari aka nyere aka na South Korea.
Na-ekwu okwu site na Akụkọ a, ngwaọrụ ise kachasị elu na ndepụta DxOMark n'oge ahụ bụ Huawei P30 Pro (112), ndị Samsung Galaxy S10 5G (112), ndị Mate 20 Pro (109), ndị P20 Pro (109) na Galaxy S10 Plus (109). Na Xiaomi Mi 9 a kpọgara ya ebe nke isii, yana ihe 107. Nke a gosipụtara nke ahụ LG V40 ThinQ abụghị otu nhọrọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kachasị mma na igwe foto, ma ee, ọ dị mma ịtụle.
A na-arụ ọrụ LG V40 ThinQ na Spain
Maka nchịkọta zuru ezu na ule nyocha, gafee nyocha DxO site na ịpị njikọ njikọ dị n'okpuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » DxOMark na-emelite LG V40 ThinQ nyochaa ma bulie akara ya
LG bu patenti ama ama ya na igwefoto isii
Ọpụrụiche !! Ibudata ma wụnye ngwa egwu Samsung Galaxy S10 na gam akporo ọ bụla